Himalaya Dainik » अष्ट्रियामा नेपाली महिलाले आफ्नै ३ सन्तानको किन समाप्त पारिन् ?
अष्ट्रियामा नेपाली महिलाले आफ्नै ३ सन्तानको किन समाप्त पारिन् ?
अष्ट्रियामा एक नेपाली महिलाले आफ्नै तीन सन्तानको ह-त्या ग-रेपछि विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय स्तव्ध छ। अष्ट्रियाबाट प्रकाशन हुने क्रोने अनलाइनले ३१ वर्षिया एक नेपाली महिलाले आफ्नै अपार्टमेन्टमा तीन बच्चाहरुको ह ‘त्या ग-रेको समाचार सार्वजनिक गरे पछि विश्वभर सन-सनि फै’लिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रियाको उच्चस्रोतका अनुसार ह’-त्याको अभि योग लागेकी बुटवल घर भएकी ३१ वर्षिया ३१ वर्षिया भट्टराई अर्याल थरकी महिला हुन्।
स्रोतका अनुसार अर्याल दम्पतीमा लामो समयदेखि पारिवारीक स मस्या थियो। उनीहरुको परिवार गुल्मीबाट वुटवल सरेको थियो।
उनीहरुको बीचको झग-डाको बारेमा स्थानीय प्रहरी समेत जानकार थियो। प्रहरीले उनका श्रीमान अर्याललाई १५ किलोमिटरको दुरी भन्दा नजिक आउन नपाउने गरि प्रति-वन्ध लगाएको थियो।
स्रोतका अनुसार केही समय अघिमात्र उनले आफ्नो परिवारभित्र सम स्या रहेको भन्दै केही सामाजिक संघसँस्थाका अगुवाहरुसँग सहयोगको लागि याचना गरेकी थिइन्। शनिबार विहान भएको घट,नाबारे प्रहरीलाई सम्पर्क गर्दा ति महिला नेपाली भएको बताएको अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत प्रकाश कुमार सुवेदीले पुष्टि गरेका छन्। दूतावासका अनुसार प्र,हरी निरन्तर दूतावासको सम्पर्कमा रहेर अनु-सन्धान अघि बढाएको छ।
ति महिलाले दुई छोरी र एक छोराको ह-‘त्या च-क्कु प्र-हार गरे र ह-‘त्या गरे पछि आ-त्मह-‘त्याको प्रयास गरेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार मृ तक मध्य ८ महिनाको छोरा र नौं र तीन वर्षिया छोरीहरु रहेको बताएको छ। प्रह-रीले अर्याललाई अनुस-न्धानको लागि हिरा-सतमा लिएको छ।
के ‘महिनावारी’ भएकाे बेलामा सम्बन्ध राख्न हुन्छ ?
कोरोना संक्रमणबाट पर्वतमा एक महिलाको घरमै मृत्यु
बलिउड ४ अभिनेत्रीः जाे बोइफ्रेन्डसँगको सम्बन्धबाट भएका थिए गर्भवती
केएमसी अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम्फाले एक युवा
रामकृष्ण ढकालको ‘अधर’मा बेलायतबासी मोडल विष्णु र रोश्नाको अभिनय (भिडियो)